फोटोशपको साथ ड्राइंगमा फोटो कसरी बदल्ने क्रिएटिव अनलाइन
Adobe Photoshop अन्तहीन संभावनाहरु छन् र यसले हामीलाई दुबै तस्बिरहरू र डिजाइनहरूमा सबै प्रकारको समायोजन र परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ जुन हामी आफ्नै बनाउँछौं र बेच्न चाहन्छौं। यो एक उत्तम हालका उपकरणहरू मध्ये एक हो र यसले डिजाइन र फोटोग्राफीको दुनियालाई फेला पार्नको लागि परिवर्तन गरेको छ यो जस्तै आश्चर्यजनक समाचार संग.
आज हामी तपाईंलाई सिकाउन जाँदैछौं एडोब फोटोशपको साथ कसरी ड्राइंगमा फोटो बदल्ने। हामी यसलाई ग्यालेरी र आफ्नो आफ्नै हातले बिभिन्न फिल्टरहरू प्रयोग गर्दैछौं यसलाई अझ वास्तविक बनाउन, ताकि यस्तो लाग्न सक्छ कि हामी आफ्नो घरको साथी वा साथीको फोटो पेन्सिल र इरेजरको साथ गर्यौं।
ट्यूटोरियलको साथ सुरु गर्नु अघि, तपाईं सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो च्यानलमा प्रकाशित गरेको भिडियोबाट सेवा प्रदान गर्नुहोस् क्रिएटिभोस अनलाईन को चरणहरु अनुसरण गर्न को लागी छ र यहाँ बाट सजिलो छ।
फोटोशपको साथ चित्रलाई चित्रमा रूपान्तरण गर्ने चरणहरू
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यो छवि तलको ट्यूटोरियल गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
फोटोशपमा छवि खोल्नुहोस्, अब नक्कल तह नियन्त्रण संग + J.
एकचोटि नक्कल तह चयन भएपछि हामी जान्छौं "नयाँ भरण वा समायोजन तह सिर्जना गर्नुहोस्" तह विन्डो नियन्त्रणहरूमा।
छवि कालो र सेतो हुनेछ।
अब हामी आवेदन दिन्छौं ब्लेडि mode मोड "डज र Color" नक्कल तह वा तह १ मा।
लक्ष्यहरू देखा पर्नेछन् जब हामी अर्को प्रभावमा जान्छौं।
हामी नियन्त्रण + I को साथ रंगहरू उल्टो गर्दछौं र छवि पूर्ण रूपमा खाली देखिनेछ।
अब लेयर १ मा स्मार्ट वस्तु बनाउने समय भयो लेयरमा दायाँ क्लिक गरेर र त्यो विकल्प चयन गरेर।
हामी फिल्टरमा परिवर्तन गर्न सक्षम गर्न यो कार्य गर्दछौं र यसरी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्षम हुनुहोस् यदि हाम्रो छविलाई यो आवश्यक छ एक ठूलो पेन्सिल प्रभाव उत्पादन गर्न।
यद्यपि तपाईंसँग स्मार्ट वस्तुमा रूपान्तरण गर्न विकल्प छैन, यस चरणको साथ तपाईं जारी राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले फिल्टर> ब्लर> गौसियन ब्लरमा जानु पर्छ।
मा गौसिया ब्लर विन्डो हामी त्रिज्या २.2,7 पिक्सेलले परिमार्जन गर्छौं। यस तरीकाले हामीसँग रेखाचित्र हुनेछ र अनुहारको उचित आकार हुनेछ। यदि हामी अर्को तस्विरको अगाडि भएका थियौं भने हामी त्रिज्या बदल्न सक्दछौं ताकि यो अझ राम्रोसँग फिट हुन सक्दछ, किनकि हामीसँग भएको एक उज्यालो छ।
हामी यसलाई लागू गर्न ठीकै दिन्छौं।
हामी जाँदै छौं पृष्ठभूमि छवि फेरि नक्कल नियन्त्रणको साथ + J र हामी त्यसलाई तहहरूको माथि उठाउँछौं।
हामी जाँदै छौं विशिष्ट छवि रंग नियन्त्रण + Shift + U. को साथ।
अब हामी फिल्टरबाट फिल्टर अर्को फिल्टर प्रयोग गर्दछौं> फिल्टर गैलरी> Stylize> चमक चमक।
यहाँ विचार यो छ कि हामी रेखाचित्र कोरिएको देख्न सक्छौं, त्यसैले हामी एज चौड़ाई १ गर्न, ब्राइटनेस and लाई, र Smo लाई स्मूथ लागू गर्दछौं।
हामी ठीक छ, र अब नियन्त्रण + I को साथ र in्गहरू उल्टाउनुहोस् छुनुहोस्.
यो गुणा सम्मिश्रण मोड लागू गर्ने समय हो। हामी सेतो पिक्सेल अदृश्य र अँध्यारो देखिने बनाउँदछौं।
विचार अब अनुदान छ त्यो कोइला टच को चित्रण छायाको लागि। हामी नियन्त्रण + J को साथ पृष्ठभूमि तह नक्कल गर्छौं र यसलाई तहहरूको शीर्षमा ल्याउँछौं।
हामी नियन्त्रण + Shift + U को साथ छवि पृथक गर्दछौं।
र हामी अगाडि बढ्छौं फिल्टर> फिल्टर ग्यालेरी> स्केच> चारकोल। हामी चारकोल चौडाईमा १, विस्तृतमा detail light र प्रकाश र छाया ब्यालेन्समा लागू गर्दछौं।
प्रत्येक चोटि जब हामी फिल्टरहरू परिमार्जन गर्छौं यो सधैं प्रयोग गर्ने फोटोहरूमा निर्भर गर्दछ। यो केहि निश्चित छैन र के तपाइँले खेल्नु पर्छ।
यो प्रयोग गर्ने समय हो मिश्रण मोड "गुणा" लेयरमा हामीले चारकोल लागू गरेका छौं।
अब, यदि हामीसँग अझ राम्रो Wacom ट्याब्लेट कोर्न कोरे। तर यो आवश्यक छैन किनभने माउसको साथ, र हामी चित्र बनाउनमा निपुण छैनौं। भीड कोर्ने क्रममा हामी छायाँ लागू गर्न सक्छौं लाइनहरु को।
हामी बी संग ब्रश छान्छौं र p१ पिक्सेलको साइज राख्छौं जसले गर्दा यसले लगभग आँखा कभर गर्दछ।
हामीले बुझ्दछौं कि चारकोल प्रयोग गर्दा आईरिस मुश्किलले मात्र देखिन्छ, त्यसैले हामी यसलाई बाहिर ल्याउन ब्रश प्रयोग गर्नेछौं।
हामी सतह विन्डोको तल बटनबाट मास्क लेयर सिर्जना गर्दछौं।
हामी थिच्दछौं अग्रभूमि र change परिवर्तन गर्न X कुञ्जी कालो द्वारा यदि यो सेतो वा अर्को थियो। यस तरीकाले, जब हामी कालोमा रंग्दछौं, पिक्सेलहरू चयनित हुन्छन्।
हामी कालोले रंग्यौं र हामी इच्छित प्रभाव उत्पादन गर्दछौं। तपाईं आँखामा अघिल्लो छवि संग फरक देख्नुहुन्छ:
हामी ती कालो भागहरू उज्यालो पार्न चित्रकला गर्न जारी राख्न सक्छौं। छुनुहोस् जब सम्म तपाईं चाहानुहुन्न ड्राइ drawing्ग नियन्त्रण को उपयोग नगरी भुक्तान + क्यापिटल अक्षरहरू + Z मेटाउन को लागी यदि तपाईंलाई असर प्रभाव छैन भने।
१ वा २ पिक्सलको साथ ब्रश सानो बनाउने समय हो।
हामी सिर्जना गर्दछौं नियन्त्रण + Shift + N को साथ एक नयाँ तह.
कालो ग्रेर बनाउनका लागि हामीले 56 XNUMX% प्रवाह कम गर्‍यौं र पेन्सिल ड्रइंग जस्तो देखियौं।
हामी छविलाई विस्तार गर्दछौं र पेन्सिल छायाँ उत्पादन गर्न छविमा रेखाचित्र सुरू गर्दछौं।
यो ती मार्गहरू लागू गर्न समय खर्च गर्ने कुरा हो हातले कोरिएको जस्तो देखिने बनाउनका लागि कालोहरू प्रयोग गर्नुहोस्उदाहरण को छविमा हामी यो कसरी गरिन्छ भनेर लगभग देखाउँदछौं।
त्यो प्राविधिक तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ कपाल, शरीर र कवचमा लागू गर्नुहोस् छवि अगाडि / पछाडि यो जस्तो देखिन्छ:
त्यसोभए यो बढाइनेछ:
पूरै फोटो कोरियो, हामी नयाँ ठोस भर्न लेयर सिर्जना गर्छौं सेतोमा:
हामी नयाँ लेयर बनाइएको निष्क्रिय पार्छौं।
हामी तह विन्डोमा च्यानलहरूमा जान्छौं र ती मध्ये कुनै पनि छनौट गर्दछौं। उहि नीलो।
नयाँ च्यानल सिर्जना गर्न हामी यसलाई तल अवस्थित आइकनमा तान्दछौं।
Lo हामी नियन्त्रण + I को साथ र colors्गहरू चयन र इन्भर्ट गर्दछौं.
विचार अब छविमा लाइट पिक्सेलको चयन सिर्जना गर्ने हो। हामी नियन्त्रण + ब्लू प्रतिलिपि of को थम्बनेल मा क्लिक गर्दछौं।
हामी तह च्यानलमा जान्छौं र फिल लेयर सक्रिय पार्छौं।
हामी सिर्जना गर्दछौं नयाँ ठोस र color भर्ने तह र र color्ग छनौट गर्दा हामी देख्न सक्छौं कि सेपिया प्रभाव कसरी उत्पादन हुन्छ यदि हामी सुन्तला वा खैरो टोन प्रयोग गर्छौं वा निलो भए पनि।
यस अवस्थामा हामी कालो र निलो नजिक एक प्रयोग गर्नेछौं।
हामी ठीक थिच्दछौं र हामीसँग हाम्रो समाप्त छवि हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी फोटोशपको साथ ड्राइंगमा फोटो बदल्ने
म कसरी यसलाई प्रारम्भिक रंग राख्नको लागि बनाउने? त्यो भनेको यो रेखाचित्र जस्तो देखिन्छ तर कालो र सेतोमा होइन? धन्यवाद